ओमकार टाइम्स कोरोनाको नयाँ लहरबाट बच्नका लागि के खाने, के नखाने ? - OMKARTIMES
कोरोनाभाइरसले एकपटक पुनः समस्या बढाइदिएको छ । कोरोनाको नयाँ रुपमा निकै संक्रामक छ र थोरै लापरवाहीले पनि यो महामारीलाई निम्तो दिने गर्छ । बारम्बार हात धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दुरीका साथै तपाईंले खानपिनमा पनि असाध्यै ध्यान दिन आवश्यक छ । यो मौसममा पौष्टिक तत्व र बारम्बार पानी पिउँदा रोग प्रतिरोधी क्ष्मता बलियो बन्ने गर्छ । यसले गम्भीर रोग र संक्रमणको खतरा कम हुने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट बच्नका लागि यस्ता खानेकुराको सेवन गर्न सुझाएको छ ।
कोरोनाबाट बच्नका लागि कस्तो हुनुपर्छ डाइट ?
तपाईंले आफ्नो खानामा विभिन्न प्रकारको ताजा फलफूल र अनप्रोसेस्ड फूड समावेश गर्नुपर्छ । यसमार्फत्, तपाईंलाई आवश्यक भिटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्ट पाउन सकियोस् ।
असाध्यै धेरै फलफूल, सागसब्जी, दाल, गेडागुडीलगायत नट्स, मकै, ओट्स, गहूँ, ब्राउन राइस, जरा भएका सब्जी जस्तै आलू, सख्खरखण्ड खानुहोस् । यसबाहेक मासु, माछा, अण्डा, दुधलाई खानमा संलग्न गर्नुहोस् ।
हरेक दिन कम्तीमा २ कप फलफूल, २.५ कप सागसब्जी, १८० ग्राम गेडागुडी र १६० ग्राम मासु र केराऊ खानुहोस् । हप्तामा १–२ पटक रातो मासु र २–३ पटक मासु खान सक्नुहुन्छ । बेलुकाको समयमा हल्का भोक लाग्दा काँचो सागसब्जी र ताजा फलफूल खानुहोस् । सागसब्जीलाई धेरै पकाएर नखानुहोस् नभए यसका आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हुन्छन् । यदि तपाईं डिब्बामा बन्द गरिएका फलफूल वा सागसब्जी खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यसमा नुन र चिनी बढी नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
पानीमा ध्यान दिनुहोस्ः
शरीरका लागि पानी असाध्यै आवश्यक छ । यसले रगतमा पोषक तत्व पुर्‍याउने काम गर्छ, शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्छ र विषाक्त पदार्थलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । हरेक दिन कम्तीमा ८–१० गिलास पानी पिउनुहोस् । पानीबाहेक फलफूल, सब्जीको जूस, कागती पानी पनि पिउनसक्नुहुन्छ । सफ्ट ड्रिङ्क, कोल्ड ड्रिङ्क, सोडा वा कफीको मात्रा असाध्यै कम गर्नुहोस् ।
फ्याटी फिस, बटर, नरिवलको तेल, क्रिम, चिज वा घ्यूमा पाइने स्याचुरेटेड फ्याटको साटो खानमा अनस्याचुरेटेड फ्याट्युक्त माछा, एभोकाडो, नट्स, ओलिभ ओयल, सोया, क्यानोला, सूर्यमुखसी र कर्न ओयल समावेश गर्नुहोस् । रातो मासुको साटो सेतो मासु वा माछा खानुहोस् किनभने यसमा फ्याट कम पाइन्छ । प्रोसेस्ड मीट कुनै पनि हालतमा नखानुहोस् ।
बाहिरको खाना खानबाट बच्नुहोस्ः
कोरोना एक–अर्काको सम्पर्कमा आउँदा तीब्र रुपमा फैलने गर्छ । यसबाट बच्नका लागि बाहिर गएर खानुको साटो घरमा नै खाना खानुहोस् ।
यी खानेकुराबाट टाढै बस्नुहोस्ः
मोटोपना, मुटुरोग, स्ट्रोक, मधुमेह र केही प्रकारको क्यान्सरबाट टाढा रहनका लागि चिनी, बोसो र धेरै नुन सेवन गर्नबाट जोगिनुहोस् । दिनभरी १ चम्चाभन्दा बढी नुन नखानुहोस् ।
जति सक्नुहुन्छ त्यति ट्रान्स फ्याटबाट टाढै रहनुहोस् । प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, स्न्याक्स फूड, फ्राइड फूड, फ्रोजन पिज्जा, कुकिज र क्रिममा ट्रान्स फ्याट पाइन्छ । कुनै पनि अन्य रोगबाट कोरोना हुने सम्भावना थप बढ्ने गर्छ । त्यसैले आफूलाई पूर्ण रुपमा स्वस्थ राख्नुहोस् ।
पोषणयुक्त खानेकुरा र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा स्वास्थ्य र प्रतिरोधी क्षमतालाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ तर यो कुनै जादु भने होइन । जो मानिसहरु पहिले नै बिरामी छन् वा जसलाई कोरोना भएको छ, उनीहरुले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको पनि असाध्यै ख्याल राख्न आवश्यक छ । यदि तपाईं मानसिक रुपमा सहज महसुस गर्नुहुन्नँ भने कुनै मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार १९६ जनामा संक्रमण पुष्टि, ५० जनाको मृत्यु
ललितपुरमा प्रहरी परिचालन गरेर अक्सिजन सिलिन्डर संकलन
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ९ हजार ७० जना कोरोना संक्रमित, एकैदिन ५४ जनाको मृत्यु
शय्या चाहियो, यी नम्बरमा फोन गर्नुस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
मोरङ लेटाङका एकै गाउँका १९ जनामा कोराना संक्रमण
८ हजार ६ सय ५ जनामा कोरोना पुष्टि
छोटा राजन जीउँदै रहेको अस्पतालको दाबी
पीसीआर परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वाब संकलन
मिस युनिभर्समा सहभागी हुन अमेरिका पुगिन् अंशिका
लमजुङमा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै
गुल्मीमा चट्याङ्ग लागेर एक जनाको मृत्यु , ८ घाइते